Mirissa၊ သီရိလင်္ကာရှိဝေလငါးသန့်ရှင်းရာဌာန ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သောသမုဒ္ဒရာတွင်လင်းပိုင်၊ ဝေလငါးများနှင့်အခြား cetaceans များကိုတွေ့မြင်လိုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်သင်လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ Mirissa ကမ်းခြေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှလူအများစုကနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးထောင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mirissa သည်ဝေလငါး၏သန့်ရှင်းရာဌာနသည်ကျွန်း၏တောင်ဘက်စွန်းတွင်ရှိပြီးအီကွေတာမှကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန့်သာဝေးသည်။ ဤသည်သီးခြားလခြမ်း -shaped ကမ်းခြေတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အခွင့်ထူးခံနေရာ, သငျသညျအပန်းဖြေခြင်းနှင့်တမလွန်ဘဝ၏ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားမှုများကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ ကမ္ဘာအနှံ့မှကီလိုမီတာထောင်နှင့်ချီ။ ခရီးသွားသောခရီးသွားများအားလုံးသည်ဤ ဦး တည်ရာ၌ပျောက်ဆုံးရန်ရှာကြံကြသည်။
Mirissa အနီးသို့ရေကူးနေသည့်ဝေလငါးများနှင့်လင်းပိုင်များအားစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသီရိလင်္ကာတွင်ပြုလုပ်နိုင်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့မြင်ကြသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြာရောင်ဝေလငါးများ၊ Bryde ၏ဝေလငါးများ၊ သုက်ပိုးဝေလငါးများ၊ အပင်ဝေလငါးများနှင့်မတူကွဲပြားသောလင်းပိုင်မျိုးစိတ်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်လိပ်များနှင့်အပြာရောင်တူနာငါးများနှင့်ပျံသန်းသောငါးများကဲ့သို့သောထူးခြားဆန်းပြားသောငါးမျိုးစိတ်များကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ Mirissa မှာဝေလငါးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရာသီကိုနို ၀ င်ဘာလမှာစတင်ပြီးAprilပြီလမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အနွေးဆုံးရာသီ၊ လှေများသည်နံနက်စောစောတွင်ထွက်ခွာကြသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် cetaceans များကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲပြီး ၄ နာရီခန့်ကြာသည်။
1 Mirissa ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2 Mirissa မှာတည်းခိုစရာရှိပါသလား။
3 Mirissa မှာစျေးပေါပေါနဲ့ဘယ်မှာစားရမလဲ
4 Mirissa မှာဘာလုပ်ရမလဲ
5 Mirissa, ဝေလငါးသန့်ရှင်းရာဌာန
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ဤလှပသောကမ်းခြေသို့ရောက်ရန်သင်သည် Tangalle မြို့မှ Mirissa သို့ထွက်ခွာရမည်။ ဘတ်စ်ကားများကသင့်ကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့နေ့တိုင်းခေါ်ဆောင်သွားသောကြောင့်သင်သွားရန်ပြgettingနာမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် ခရီး ၂ နာရီကြာပါတယ်, ဒါကြောင့်မိနစ်ပိုမြန်သွားစေရန်, စာအုပ်ကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဝါသနာယူရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဟုတ်ပါတယ်။ visitors ည့်သည်များအတွက်အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အဓိကလမ်းမကြီးနှင့်ကမ်းခြေအနီးတွင်နေစရာနေရာမရှိတော့ပါ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းများကွဲပြားနိုင်သည် အရမ်းစျေးပေါတယ်.
လမ်းinရိယာရှိတည်းခိုနေထိုင်မှုသည်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည် (အိန္ဒိယရူပီး ၈၀၀ ခန့်ကုန်ကျနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၁ ယူရိုနှင့်ညီမျှသည်) ။ အကယ်၍ သင်ရှောင်ရှားနိုင်လျှင်သင်၏ခရီးကို ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ဒီveryရိယာကအရမ်းဆူညံနေသည်.
စံပြareaရိယာကိုရှာရန်သင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးမြောက်ဘက်သို့သွားရမည်။ ရူပီး ၁၀၀၀ (၁၃.၃၀ ယူရို) အတွက်သင့်တော်တဲ့အခန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်း၊ ၀ ိုင်ဖိုင်၊ ရေပူနဲ့ရေချိုးခန်းအပြင်သန့်ရှင်းသည်။ လမ်းကနည်းနည်းလေးကွာတဲ့အတွက်အရမ်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ ဒါ့အပြင် သငျသညျထိုကဲ့သို့သောခမ်းနားကမ်းခြေအလွန်နီးကပ်ဖြစ်လိမ့်မည်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏အလှဆုံးသောနေရာတစ်ခုကိုမသွားမီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်၊ ငါတို့အစာအိမ်ကိုဘယ်လိုဖြည့်သလဲ အမှန်တရားကတော့ Mirissa မှာသဲသောင်ပြင်တွေများများစားစားမရှိဘူး၊ သဲသောင်ပြင်မှာတွေ့ရမယ့်သဲသောင်ပြင်တွေများစွာရှိပေမယ့်အချို့လည်းရှိတယ်။
အဓိကလမ်းမကြီးတွင်စားသောက်ဆိုင်နှစ်ခုရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်မတူညီသောဟင်းပွဲများကိုသင်မှာယူနိုင်သည်။ ရူပီး ၂၀၀ ခန့် (အကြောင်းကို3ယူရို) ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား တစ်ခုတည်းသောအရာကမင်းဘီယာသောက်ချင်ရင် Mirissa ကမ်းခြေကိုရောက်ဖို့စောင့်ရလိမ့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲဒီမှာသာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးကြတာမို့စျေးကအရမ်းဈေးကြီးတယ်၊ ၂ ယူရိုလောက်။
သင်အံ့မခန်းဖွယ်အပူပိုင်းဒေသသို့သွားသောအခါလုပ်စရာများစွာရှိသည်။ သင်အားသာချက်ယူနိုင်သည် Sry Lanka ရေတပ်၏လိပ်များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်ရှုပါ, လှိုင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ, ငါးဖမ်းခြင်း, snorkelling သွားပါ ကျွန်းနောက်ကွယ်မှပင်လယ်အော်၌တည်၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကိုတက်ပါ.
သို့သော်ဤကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများစုမှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ဝေလငါးကြည့်တာ နှင့်ရိုင်းအခြား cetaceans။ ခရီးစဉ်သည်ရူပီး ၃၀၀၀ (ယူရို ၄၀) ခန့်ကုန်ကျပြီး ၃ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်းကြာမြင့်သည်။ အကယ်၍ သင်၏လက်မှတ်ကိုဆိပ်ကမ်းတွင်တိုက်ရိုက် ၀ ယ်ပါကရူပီး ၅၀၀ ကိုချွေတာနိုင်သည်။
အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် cetacean ကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ၉၅%။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုကမ်းခြေပေါ်၌စောစောစီးစီးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်အခြားအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ စိတ်ရှည်ရန်လိုပေမည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်အစာရှာရန်မည်မျှဝေးဝေးသွားသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒါကြောင့်မို့လို့မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရချင်တယ်ဆိုရင်၊ မွေ့လျော်နိုင်သောရာသီဥတုနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောတိရိစ္ဆာန်များရှိသောကျွန်းတစ်ခုပေါ်တွင်သီရိလင်္ကာသို့သင်၏လက်မှတ်ကို ၀ ယ်ပါ။ သင်ဘယ်လောက်ပျော်စရာတွေ့ရမယ် ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ » Mirissa၊ သီရိလင်္ကာရှိဝေလငါးသန့်ရှင်းရာဌာန
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချစ်ဆုံးကမ်းခြေ (၁၀) ခု (၂)